Jordania : Tsy ny voninahitra no ho atao anton’ny heloka · Global Voices teny Malagasy
Ny finoana silamo tsy manala ain'olona tondroina fotsiny ho nijangajanga
Voadika ny 24 Aogositra 2020 12:53 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, বাংলা, 日本語, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aprily 2009 / Amin'ny teny anglisy daholo ny rohy rehetra ato)
Nandritra izay telo herinandro izay, taorian'ny fanamelohana raim-pianakaviana iray sy ireo zanany lahy roa – nidaroka nahafaty ny zanany vavy sy anabavin-dry zareo noho izy ireo « nivoaka nanao ankosotra» dia tsy nitsahatra ireo Jordaniàna bilaogera ny nampita ireo antso manohitra ny « heloka fiarovam-boninahitra. »
Niteraka onjam-pahatairana sy hagagàna io fanamelohana io, na teny anivon'ny tontolon'ny bilaogy, na teny anivon'ireo gazety goavana sasantsasany efa mahazatra ao Jordania, satria hatramin'ny fiandohan'ny taona dia io no fanimpito tamin'ireo vehivavy novonoin'ny fianakaviany tamin'ny fomba feno herisetra noho izy noahiahiana ho ‘nijangajanga’.
Ilay bilaogera Kinzi no isan'ny voalohany nanasa ireo Jordaniàna bilaogera (lehilahy) mba hiàla amin'ny fahanginany mitambesatra amin'ity resaka ity.
« Vao resaka Gaza dia mitsangana daholo ianareo rehetra. Fa amin'ity indray mitoraka ity, eto anivontsika ny ratsy, ny lalànantsika no manao azy, tànana Jordaniàna no manatanteraka. Mba mivaky loha amin'ireo vehivavy mpiray tanindrazana aminareo ve ianareo tahaka ny ataonareo ho an'ireo vehivavy tsy manantsiny ao Gaza? »
Ho setriny, dia hoy ny fanentanana fanohanana iray tamin'ny alàlan'ny imailaka nalefan'ny “The Arab Observer” ao anaty lahatsoratra iray :
« Tonga izao ny fotoana ho an'ireo mpampahalala vaovao eto amin'ny firenena, na izany an-taratasy, na ireo an-tambajotra, hanaporofoan-dry zareo ny fandraisany andraikitra manoloana ireo olompirenena jordaniàna. Fotoana izao ho anareo rehetra hanandratanareo ny feonareo sy hanaovanareo tsindry mba hanafoanana lalàna iray efa tena lany andro. Zavatra tokony ataontsika izany, trosantsika amin'ireo renintsika, amin'ireo anabavy sy amin'ireo vadintsika ; tokony atolotsika azy ireo ny fahamendrehana, ny fitoviana ary ny fahatoniana. Na iray aza tsy tokony hisy vehivavy jordaniàna hatahotra ny fiampangan'ny olona iray avy ao anatin'ny fianakaviany. Tsy misy na iray aza lehilahy tokony ho afa-maina satria hoe heloka famonoana ho fiarovam-boninahitra no vitany. »
Tsipihan'ny toko faha 340 sy 98 ao anatin'ny Lalàna Famaizana Jordaniàna fa ny lehilahy iray mamono mahafaty na mandratra ny vadiny , na vehivavy iray ao anatin'ny fianakaviany, noho ny hatezerana tafahoatra, taorian'ny nahatratrarany fiarahana “fijangajangàna”, dia hahazo fanamaivanana sazy. Tamin'ny 2003, in-droa ireo solombavambahoaka mpifikitra amin'ny nentindrazana, izay maro an'isa ao amin'ny antenimiera, no tsy nahavita nanafoana na nanova ireny lalàna ireny. Nisy fito ireo “heloka bevava ho fiarovam-boninahitra” tamin'io taona io.
Raha nanjohy ireo bilaogera hafa, izay manohana io hetsika manohitra ny “heloka ho fiarovam-boninahitra” io, manoratra i Qwaider fa tsy misy na karazana porofo iray aza azon'ny lalàna na ny fampianarana azon'ny finoana silamo aroso momba io resaka io.
Betsaka no mihevitra hoe “ireo heloka ho fiarovam-boninahitra” dia avy ao anatin'ny Charia.
Maro no mihevitra fa manana ny fototra nipoirany any anatin'ny lalàna silamo Charia ny “famonoana ho fiarovam-boninahitra”. Amin'ny fo tsy miangatra, lavitra be an'izany ny tena fahamarinana. Raha ny marina, ny finoana silamo tsy manala ain'olona noho izy ambara ho nijangajanga, fa tsy maintsy porofoina izany…Olona efatra afaka manaporofo fa nahita maso azy ireo no ilainao ho vavolombelona…Ho sazy, ireo tokantena (na lahy izy na vavy) dia hahazo vely karavasy (na izay mifanandrify aminy amin'izao vaninandro maoderina izao).
Antsoiny ireo bilaogera namany mba hanomboka « fanentanana iray hanoherana ireny famonoana tsy an-drariny, tsy araka ny maha-olombelona, faran'izay mampietry voninahitra ireny, izay ny lalàna no miaro azy. »
Nisy akony teny anivon'ny tontolon'ny bilaogy siriàna ireny antso ireny.
Ho an'ilay bilaogera Bam Bam, zara raha misy fifanakalozana eo amin'ireo Jordaniàna sy Siriàna bilaogera. Saingy raha ny fanamafisana entin'ireo lahatsoratra voasoratr'ireo Siriàna bilaogera, tohanan-dry zareo io fanentanana io :Abu Fares , Razan, ary ny farany sangy tsy ny kely indrindra dia KJ , izay namoaka tantara noforonina “Ny antony namonoako ny anabaviko.”
Bam Bam manohy amin'ny filazana fa tena fotoana indrindra izao mba hametrahan'ny rehetra ny fanontaniana sarotra hoe:
« Zava-maningana ve ireo heloka ho fiarovam-boninahitra sa fahatanterahan'ny tranga marobe niteraka ny fanaovana azy ireny ? Impiry ireny tranga ireny no niseho ? Raha ahenako ny mety ho fatati-pitrangan'izy ireny, ho azoko atao ve ny hampihena ireny heloka ireny? Nahoana ny olona no manatantraka ireny heloka ho fiarovam-boninahitra ireny ? Noho ny finoana arahana ve, mba hiarovana ny sata sôsialy sy ny laza aman-kajan'izy ireo sa mety misy antony hafa? »
Raha teo ampampitàna ireny hafatra ireny ireo bilaogera, nisy heloka iray hafa nitranga : nisy lehilahy iray 19 taona voampanga ho namono nahafaty ny anabaviny 21 taona, taoriana kely monja nanesoran'ny governora ny fiarovana nomeny azy. Tao anatin'ny fibabohany, nilaza ralehilahy fa « nivoaka matetika tsy milaza izay ho alehany ilay anabaviny. “
Momba ilay fiampangàna, ilay vehivavy bilaogera Kinzi mihevitra hoe « efa fivoarana izany raha oharina amin'ireo sazy maivana enina volana ». Voaheloka hifonja 7 taona sy tapany ilay lehilahy. Nampiany fa tamin'y 2007 ilay bilaogera Naseem Tarawnah no efa nitatitra momba ilay famonoana ary nanoratra fa ilay nidiran-doza, toy ireo hafa tamin'ireny tranga ireny dia virijiny daholo. Araka io fanadihadiana tanaty fahitalavitra io, teo anelanelan'ny 18 sy 20 isantaona no isan'ireo « heloka ho fiarovam-boninahitra» nentina teny amin'ny fitsaràna tao Jordania.